Seyinomphathi omusha wezinhlelo iVuma FM
UMPHATHI omusha wezinhlelo kwiVuma Fm uVusumuzi Shangase Isithombe: SITHUNYELWE
UMPHATHI omusha wezinhlelo zeVuma FM, uVusumuzi Shangase, uthe izinto zizoqhubeka ngokujwayelekile kulo msakazo njengoba esethathe izintambo.
UVusi uqale kule nyanga ngemuva kokuthatha izintambo kuPatrick Bogatsu.
“Izinto zizoqhubeka ngokujwayelekile. Uma kodwa kunezinguquko ezinkulu sizobazisa abalaleli bethu nabezindaba,” kusho uVusi.
UVusi, oke waphatha iDurban Youth Radio eminyakeni edlule, uthe uneziqu zeCommunication Science azithola e-Unisa nezeHonours degree in Media and Cultural Studies zaseNyuvesi yaKwaZulu-Natal.
“Sengisebenze njengomphathi wesiteshi, umphathi wezinhlelo nomdidiyeli emisakazweni. Ngisebenzele nenkampani ezimele ngibhekelele imisakazo yomphakathi neziteshi ezingenisa inzuzo ezizinze eKZN. Ngaphezu kwalokho ngike ngaqashwa njengothisha womsakazo eBoston Media House eThekwini unyaka nohhafu.”
Uthe iVuma FM ishintshe kakhulu kunangesikhathi iqala.
“Kugxilwe kakhulu emculweni nasezingosini ezihlabahlosile eziheha abalaleli. Ukuphawula kwabantu abasilalelayo nabasesekayo mihla namalanga kuyakhombisa ukuthi senza kahle futhi kungenzeka (ukuthi bafike kubalaleli abangu-1 million).
Ngesikhathi iVuma iqala abaphathi bayo ngaleso sikhathi babenesifiso sokuthi ibe nabalaleli abangu-1 million. Njengamanje, ngokwezibalo ezishicilelwe yiBroadcast Research Council of South Africa, lesi siteshi sinabalaleli abangu-180 000.
UVusi ozichaza njengomuntu ohlale ebheka izindlela zokuthuthukisa umsakazo kuleli uthe abantu abakhulile kumele balalele iVuma FM ngoba badlala umculo ohamba phambili.